Automatic gilasy mochi milina fanaovana - China Shanghai Hanjue milina
Famaritana: HJ-860II telo Hoppers Encrusting Machine manana bebe kokoa famokarana sakafo isan-karazany noho ny HJ-860 Multipurpose Encrusting Machine. Ankoatra ny asa ny HJ-860, HJ-860II azo ampiasaina ihany koa mba hamokarana sakafo / Snack / mofomamy roa dia nahafeno sy roa loko, toy ny Lalàn'i Mosesy mofomamy, Margaret biscuit, mochi amin'ny famenoana famenoana anatiny. Milina ity dia natao mba misahana ny amin'ny fanamboarana ny fanaova-mofo sy Snack SIRAMAMY sakafo, ary miasa miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany sakafo en ...
HJ-860II telo Hoppers Encrusting Machine manana bebe kokoa famokarana sakafo isan-karazany noho ny HJ-860 Multipurpose Encrusting Machine. Ankoatra ny asa ny HJ-860, HJ-860II azo ampiasaina ihany koa mba hamokarana sakafo / Snack / mofomamy roa dia nahafeno sy roa loko, toy ny Lalàn'i Mosesy mofomamy, Margaret biscuit, mochi amin'ny famenoana famenoana anatiny.
Milina ity dia natao mba misahana ny amin'ny fanamboarana ny fanaova-mofo sy Snack SIRAMAMY sakafo, ary miasa miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany avy amin'ny sakafo malefaka ny dity ary afaka ho mendrika amin'ny kofehy mifamatotra ho an'ny koronosy faharoa.
OF fepetra arahana HJ-860II
entam-barotra Name Multipurpose Encrusting Machine
entam-barotra Model HJ-860II
-maso Plc Touch Screen
Convertor / Inverter Delta Material Hopper PC firaka
Ara Power Supply Delta Conveyor Food Grade Pu
Shutter & Lasitra UPE Nozzle PE
Production Speed 3500-7200pieces / ora Misy laharana Power 2.2kw
Taham ny sosona / hameno 9: 1-1: 9 Power TOSIKARATRA 380V / 220V, 50 / 60Hz, Single Dingana
Products Weight 5-180g / pcs lafiny 167 * 92 * 175cm
Application Loko roa mochi amin'ny famenoana, Mochi amin'ny famenoana ao famenoana, sns Weight 330KG
- Products jery fehikibo amin'ny miovaova ny hafainganam-pandeha
- Automatic fanatanterahana ny vokatra teo trays amin'ny retractile fehikibo rafitra
- Automatic fanitsiana ny isan'ny andalana, ary ny phasing ny vokatra fanatanterahana tao lovia
- Trays conveyor in Stainless vy sy ny aluminium, miaraka amin'ny Adjustable eo tongotra ary trays piling vondrona
Previous: Automatic kibbeh kubbeh milina fanaovana
Next: Automatic ranomandry efajoro mofomamy natao milina fanaovana mofomamy
Automatic feno milina fanaovana mofomamy sadika
Automatic daty bara voankazo toeram milina fanaovana
Automatic kibbeh kubbeh milina fanaovana
Biscoitos manao milina mandeha ho azy